Homeसमाचारफेसबुकमा नयाँ विषेशता थप्ने तयारी, कस्ता कस्ता छन् त? हे’र्नुहोस्
June 18, 2021 admin समाचार 1313
विश्वभरी लोक’प्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नयाँ विषेशता थप्ने तयारी भएको छ । फेसबुकमा अडियो सा’मग्री बज्ने सुविधा थप्ने तयारी भइरहेको अधिकारीहरुले जान’कारी दिएका छन् ।
फेस’बुकमा यो सेवा आगामी जुन २२ देखि सुरु हुने जनाइएको छ । कम्पनीका अधिकारीहरुका अनु’सार अप्रिलमा नै नयाँ विषेशताका बारेमा परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षणबाट नतिजा सकारात्मक आएपछि अहिले पुरै तयारीका साथ जोड्न थालि’एको हो ।
पोड’कास्ट सेवा जोडिएपछि फेस’बुक एपमा नै सिधै अडियो सामग्रीहरु सुन्न मिल्ने भएको फेसबुक कम्पनीले जनाएको छ । अडियो सेवाका बारेमा इमेल मार्फत जान’कारी दिने र जोड्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको पनि अधिका’रीहरुले बताएका छन् ।
फेसबुकको न्युज’फिडमै अडियो पोस्ट गर्न मिल्ने र त्यही बजाएर सुन्न मिल्ने व्यवस्था हुने भएको छ । कुनै फेस’बुक पेजमा अडियो पोस्ट गरेपछि त्यो फेसबु’कको पेजमा फलो गर्नेहरुलाई नोटि’फिकेसन पनि जाने भएको छ । न्युज24 बाट
आज मुलुकभर २,७६८ जना नयाँ सं’क्रमित थपिए, ४४ को मृ’त्यु
मृत छोरा ब्यूँताउन पुगेकी महिलालाई, बुद्धले दिए यस्तो ज्ञान पढ्नुहोस्
हे’र्नुहोस आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर, कुन देशको कति पुग्यो ?
April 16, 2021 admin समाचार 2421
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्र’बारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्व’जनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरेको विनिमय दर अनुसार अमे’रिकी डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ १८ पैसा रहेको छ ।
December 8, 2020 admin समाचार 5111
बहुमुखी प्रति’भाका धनि स्पष्ट वक्ता रमेश प्रसाई र उनका बालाप’नदेखिका साथी जीवन बिष्ट एकै मण्ड’बमा मङ्सिर २२ गते विवाह बन्धनमा बा’धिएका छन । रमेशले कालिकोटकी नन्दा’सिंहसँग लगन’गाठो कसेका हुन । धरानमा धुमधामले भएको बिबाहमा धेरैको
October 29, 2020 admin समाचार 6664